ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေ နဲ့ ပိုစ့်ပေးနေ တဲ့ အချစ်တော်မလေး ခန့် – Zartiman
ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်း ရဲ့ အချစ်ကို ဖမ်းစားညှို့ယူနိုင်လွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ပြီး အချစ်ပိုစေရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ခန့်ရဲ့ ပုံလေးတွေတိုင်းက ချစ်စရာကောင်း လွန်းနေတာကြောင့် ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော် ။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ဆက်လက်လျှောက် လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားတွေကိုလည်း အားပေးကြမယ်မလား……. ။
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ခန့် ဟာ သွယ်လျ ကျစ်လျစ်တဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းတွေကိုဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်ဟာ ကြော်ငြာတွေအပြင် ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။လတ်ရှိမှာတော့ သူမက အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် အနုပညာလောကမှာ အချိန်အတိုတွင်း ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်……။
ခန့်ဟာ မြန်မာဆန်ဆန်ဖက်ရှင် ဝတ်စုံလေးတွေ နဲ့လည်း လိုက်ဖက်မှုရှိသလို ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင် လေးတွေနဲ့လည်း ချစ်စရာ ကောင်းအောင် ဝတ်ဆင်တက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန့် ကတော့ နေ့စဉ် ဆိုသလို tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေအပြင် သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှာလည်း ခန့်က မြင်သူတိုင်းငေးမောသွားလောက်မယ် ရင်ခုန်စရာအမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်….။
Source & Photo credit – Khant’s facebook page
ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှေ နဲ့ ပိုဈ့ပေးနေ တဲ့ အခဈြတျောမလေး ခနျ့
ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ မွငျသူတိုငျး ရဲ့ အခဈြကို ဖမျးစားညှို့ယူနိုငျလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှဖွေဈတာကွောငျ့ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှေ ကွညျ့ပွီး အခဈြပိုစရေနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော ။ ခနျ့ရဲ့ ပုံလေးတှတေိုငျးက ခဈြစရာကောငျး လှနျးနတောကွောငျ့ ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုပွီး အသညျးလေးတှပေေးခဲ့ဖို့ မမလေို့ကျပါနဲ့နျော ။ ဒါ့အပွငျ သူမရဲ့ ဆကျလကျလြှောကျ လှမျးမယျ့ အနုပညာလှုပျရှားတှကေိုလညျး အားပေးကွမယျမလား……. ။
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး ခနျ့ ဟာ သှယျလြ ကဈြလဈြတဲ့ သေးသေးသှယျသှယျခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အပွုံးလေးတှနေဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ အသညျးတှကေိုဖမျးစားထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ခနျ့ဟာ ကွျောငွာတှအေပွငျ ရုပျသံ ဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အပွညျ့အဝ ရရှိထားတာဖွဈပါတယျ။လတျရှိမှာတော့ သူမက အကောငျးဆုံး ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ အနုပညာလောကမှာ အခြိနျအတိုတှငျး ရပျတညျနိုငျခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ……။
ခနျ့ဟာ မွနျမာဆနျဆနျဖကျရှငျ ဝတျစုံလေးတှေ နဲ့လညျး လိုကျဖကျမှုရှိသလို ခတျေပျေါဖကျရှငျ လေးတှနေဲ့လညျး ခဈြစရာ ကောငျးအောငျ ဝတျဆငျတကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခနျ့ ကတော့ နစေ့ဉျ ဆိုသလို tik tok ဗီဒီယိုလေးတှအေပွငျ သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ ကိုလညျး ပရိသတျတှအေတှကျ အမွဲဖျောပွပေးလရှေိ့ပါတယျ။ယခုတဈခါမှာလညျး ခနျ့က မွငျသူတိုငျးငေးမောသှားလောကျမယျ ရငျခုနျစရာအမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ….။
ချပ်ရပ်လှပတဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ပိုစေတဲ့ ခင်သဇင်
အယ်ထနေတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ မျက်ဝန်း